Ny tena kristiana dia miomana mandrakariva ny amin’ny fiverenan’i Jesosy - Vaovao mahafaly ho anao - Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy
Ny tena kristiana dia miomana mandrakariva ny amin’ny fiverenan’i Jesosy
Samy manana ny hafatra heveriny fa maika ny Mpitory filazantsara amin’izao fotoana izao, ao ny mitory fahombiazana, ao ny manambara fandresena, ao ny mivoy ny fahasoavan’ny Tompo, eo daholo ihany izany rehetra izany ary tsy diso refa tsy mivoana amin’ny tenin’Andriamanitra ny fiainana azy, satria ny fahombiazana dia fiainan’ny kristiana isanandro, ny fandresena koa dia torakizany saingy miantomboka amin’ny fandresena ny fahotana sy ny fahazarandratsy, ny fahasoavana tsy azo lavina satria io no itoeran’ny kristiana rehetra ary hery iray anoherana ny ratsy sy itoerana anaty fahamasinana, saingy hafatra ambonin’ny hafatra rehetra ary hafatra amin’izao vanimpotoana iainantsika izao dia ny fiverenan’i Jesosy tsy ho ela ka ny tokony hiomanan’ny kristiana marina rehetra mba ho vonona ary hita tsy manantsiny amin’izany andro izany.
Vao nanomboka nitory teny i jaona mpanao batisa dia nitory ny fibebahana sy ny maha antomotra ny fanjakan’ny lanitra:
“Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra.” Matio3.2
Raha tonga tety antany Jesosy kristy dia izay ihany koa no nambarany:
“Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitori-teny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra.” Matio 3.3
Rehefa nitory ny mpianatra taorian’i Jesosy Kristy ary nandritra ny nandalovany tety antany dia tsy niova ny hafatra fa izay ihany
Ary tamin’izany fotoana izany hoe, taonjato marobe nialoha izao iainantsika izao dia efa nilaza ny apostoly Paoly, Petera, fa ho avy tsy ho ela Jesosy koa maika va fa amin’izao vanimpotoana iaianantsika ankehitriny izao?
“Fa antomotra ny faran’ny zavatra rehetra; koa hendre ka mahonòna tena ho amin’ny fivavahana.” 1Petera 4.7
“Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Efa mby akaiky ny Tompo.” Filipiana 4.5
“Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika.” Romana13.11
I Jesosy kristy koa dia mbola nanantitra fa tsy ho ela izany fotoana izany, araka ny voasoratra hoe:
“Indro avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany.” Apokalipsy 22.12
Santionany ihany ireo fa maro ny andalantsoratra masina milaza fa hiverina ny Tompo, ary na ho ela na haingana, dia tsy maintsy ho tonga izany fotoana izany. Izay no mahatonga ny Fanahy Masina ankehitriny hampiomana, hampiomana mba tsy ho variana ny mpino ka ahodinkodin’ny mpitondra fivavahana amin’ireo karazana fampianarana samihafa mivoana amin’ny marina.
Efa betsaka ny hafatra mahakasika ny fiverenan’i Jesosy fa anio dia fepetra vitsivitsy no zaraina, fepetra izay tafiditra ao anatin’ny fiomanana isanandro ary tsy tokony amaivanin’ny kristiana te handova ny lanitra.
Voalohany indrindra, ny olona miomana amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy dia olona efa nandalo fibebahana marina, olona nanolotena ho an’i Jesosy kristy, tsy mankamamy fahotana na mitoetra anaty fahazarandratsy, ny fibebahana marina dia tsy midika fidirana ampiangonana alahady, na fanaovana asan’Andriamanitra, na mahampikambana anaty antokompivavahana na fikambanana arampilazantsara, fa averina ihany olona voakasikin’ny tenin’Andriamanitra, voakasikin’ny fitiavan’Andriamanitra, ary nanapakevitra iala amin’izao tontolo izao ka itodika sy anokana ny fiainany ho an’i Jesosy.
Izany hoe tsy maintsy olona efa nibebaka marina tamin’ny Tompo na inona na inona mety ho fahatsarany sy fahamendrehany amin’ny maha olombelona azy, tandremo fa na mihevitra ny tenanao ho tsara toetra, manao ny marina, mendrika eo amin’ny fiarahamonina aza enao ka tsy mbola nanolotena sy nandray an’i Jesosy kristy tao amponao dia mitovy amin’ny mpanota rehetra ihany ianao ary tsy ho voaray.
Manaraka izany ny olona miomana amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra dia olona misaina izany, mankamamy izay vanimpotoana izany, miandry izany fiverenany izany fa tsy variana amin’ny eto antany, tsy mifikitra sy miraikimpo amin’ny eto antany ary indrindra tsy mikatsaka harena sy manorina be eto antany. Betsaka mantsy milaza eo ambavany ihany fa miandry an’i Jesosy kanefa ny fihetsiny sy ny fiainany dia tsy manaporofo izany velively, fa hita miasa saina, mifofotra mafy ary mivaky loha fatratra ny amin’ny fiainana eto antany izy. Ny olona miomana ny amin’ny fiverenan’i Jesosy dia misaina ny zavatra any ambony, misaina ny any andanitra, lasa tanteraka any ny saina hoy ilay hira izay, hoy ny voasoratra:
“Koa raha niara-natsangana tamin’i Kristy hianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin’ny itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tànana ankavanan’Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany.” Kolosiana 3.1-2
Raha fiara sy tranobe, raha fahazoana vady sy zanaka, fahombiazana aramaterialy lava, raha fahombiazana ministera sy firoboroboan’ny asan’Andriamanitra ety antany no mahamaika sy imasoanao dia mihevera ihany fa sao ho diso zavatra ray loha ianao di any fiverenan’i Jesosy Kristy satria raha ireo no imasoanao dia tsy anisan’ireo ho voaray ianao.
Raha izay ahasoa ny tenanao lava koa, ny ampetipety anao sy ny ankohonanao, ny ampisongadina anao, ny ahatafavoaka ny aranofonao no mibahana ao anatinao dia tandremo sao tia ny ainao ianao ka ahavery azy fa hoy Jesosy hoe:
“Izay tia ny ainy no mahavery izany; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hiaro izany ho amin’ny fiainana mandrakizay.” Jaona 12.25
Ny olona miomana ho amin’ny fiverenan’i Jesosy izany dia olona tsy manisy lanjany be loatra intsony amin’ny fiainany eto antany, tsy hoe olona manao kitoatoa akory fa olona mihevitra mandrakariva izay itiavany sy ankatoavany ny Tompony, olona mahafoy, olona tia, olona miantra, olona manao ny tombontsoan’ny hafa sy ny filazantsara ambonin’ny tombontsoany, ary indrindra olona mahafoy ny ainy sy ny momba azy nohon’ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra, olona tsy manaiky vidiambola na manakalo voninahitra amin’ny fahamarinan’ny filazantsara ary tsy manodina ny filazantsara ho amin’ny tombontsoan’ny kibony.
Ny olona miomana ho amin’ny fiverenan’i Jesosy kristy izany koa dia olona mamela heloka, tsy manana lonilony na lolompo na amin’iza na amin’iza. Firifiry ireo milaza fa tia an’i Jesosy, miandry azy, mino ny fiverenany kanefa manana olana amin’ny rahalahiny na ny rahavaviny, misy aza tena anaty fitoriana sy mafana fo ery nefa tsy mifandray amin’ny mpiray tampo sy ny ray aman-dreniny akory, na inona na inona antony na tsy rariny na fifanolanana, ny olona miandry ny fiverenan’i Jesosy Kristy dia olona mamela heloka, ny antony dia olona voavela heloka sy madio eo anatrehan’Andriamanitra no ho raisin’i Jesosy kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra ka ny olona tsy mamela heloka dia tsy ho voavela heloka mihitsy, noho izany fepetra goavana tsy azo ihodivirana ny famelan-keloka ko aoka tsy hanatena ny ho voaray mihitsy izay tsy mahay mamela heloka.
Hoy ny voasoratra hoe:
“Mamelà, dia mba havela hianareo;” Lioka 6.37
“Fa raha mamela ny fahadisoan’ny olona hianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra.” Matio 6.14
Zava-dehibe ary tsy azo amaivanina, ny fiomanana amin’ny fiveranan’i Jesosy Kristy dia fankahalana an’izao tontolo izao, ny olona miomana dia olona tsy mankamamy an’izao tontolo izao, tsy olona tsy mahafoy ny fety aman-danonan’izao tontolo izao, ny fiankanjo, ny fiteny, ny fanao, ny fialambolin’izao tontolo izao nefa dia milaza fa tia an’i Jesosy.
Mazava be ny tenin’Andriamanitra hoe:
“Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin’izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray.” 1Jaona 2.15
Na inona na inona fanamarinanao tena na fanamarinanao ny ataonao sy ny fitiavanao izao tontolo izao dia efa mazava fa fahavalon’Andriamanitra mihitsy izay tia izao tontolo izao ary ny fahavalo mazava loatra tsy ho voaray mihitsy amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy.
Santionany ihany ireo fa ny Fanahy Masina mitarika ny tsirairay no mampahafantatra izay fiomanana mbola tokony atao, ireo zavatra mila atao na tokony hialana, ary izy Fanahy Masina ihany koa no manao ny asa ao anaty rehefa vonona isika, tsy vitan’ny vava miteny na fikasana fotsiny ny fiomanana fa mila fahafoizan-tena, sacrifice, ary fitiavana marina an’i Jesosy Kristy, fitiavana azy sy ny mahaizy azy mihitsy fa ny fitiavana ny asany na ny fanompoana azy tsy ahatafakatra velively ny olona iray. Ny fahasoavan’Andriamanitra no tena ahalavorary sy ahatanteraka ny tsirairay amin’ny andro iverenany satria Izy no mahatanteraka ny fahamasinana fa fiomanana no ataon’ny tsirairay eo ampiandrasana azy.
Koa miomana hihaona amin’i Jehovah Andriamanitrao.